China okpomọkụ transmitter na njikwa Manufacturer - Quality okpomọkụ transmitter na njikwa kwuru - Testeck Co., Ltd
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta > Okpomoku na onye njikwa
Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi thermocouple
Ngwaahịa a bụ ihe nkenke nwere ọgụgụ isi na-ebugharị ọnọdụ okpomọkụ, nke na-anabata ntinye 2, 3, na 4 waya Pt100 na-eguzogide nrụpụta ọkụ, na-agbakọ akara mgbaàmà ntinye, ma na-ewepụta akara ngosi 4-20mA. Na ihe mmetụta emeghe circuit kpatara mkpu ọrụ.
Ngosipụta dijitalụ RTD
Dijital ihe ngosi RTD Ngwaahịa a bụ ihe nwere ike ịhazi ihe mmetụta okpomọkụ nke na-ebunye ọkụ, nke na-anabata ntinye 2, 3, na 4 waya Pt100 na-eguzogide nrụgide ọkụ, na-agbakọ akara mgbaàmà ntinye, ma na-ewepụta akara ngosi 4-20mA. Na ihe mmetụta emeghe circuit kpatara mkpu ọrụ.
okpomọkụ njikwa akpaaka kpọmkwem
Usoro D ngosipụta nwere ọgụgụ isi bụ ụdị ọhụụ dị iche iche na-eme nchọpụta nke ọma ma mepụta site na iwebata teknụzụ mba ọzọ dị elu ma na-elekwasị anya na mkpa nke ụlọ ọrụ hydropower.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Okpomoku na onye njikwa na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Okpomoku na onye njikwa dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.